Ọkọlọtọ agwa gbapụta
Banners Bean, nke aha ya bụ maka ọdịdị oval, nke a makwaara dị ka Pop Up A-Frame Banners, Outdoor Pop Out Banners or Sideline Banners, bụ ihe ngosi ọkọlọtọ mgbasa ozi na-adọrọ adọrọ, dị arọ na nke dị mfe nke nwere ike ịtọ ma wedata n'ime afọ iri atọ. sekọnd. Eserese nwere akụkụ abụọ na-enye mkpughe kacha. Magburu onwe maka mmemme egwuregwu, nkwalite, ihe ngosi azụmaahịa na akara ntụzịaka.
Ngwa: Mgbasa ozi ime ụlọ & n'èzí, ogige ụgbọ ala, osimiri, asọmpi, mmemme, ihe ngosi, ihe ngosi, mmemme, nkwalite, agbamakwụkwọ, nnọkọ, ụlọ ahịa, ahịa, ihe ngosi akpaaka wdg.
Igwe mmiri dị larịị dị elu dị ka usoro etiti, na-esiwanye ike ma na-adịgide adịgide. Ngwa niile na-emeghe n'ime ihe ngosi nha zuru oke ozugbo, kwụsie ike mgbe egosipụtara ma dị mfe mpịaji n'ime akpa ebu.
Enwere ike ibipụta ọkọlọtọ akwa 2pcs otu ma ọ bụ ihe osise dị iche iche iji bulie mmetụta nkwado gị. Ọkọlọtọ akwa nwere eriri dị n'akụkụ/n'ala na-agbanwe agbanwe ma na-enyere gị aka iweghachi ma ọ bụ mepụta ozi ọhụrụ ngwa ngwa maka mmemme ọzọ.
Ngwa ọkọlọtọ Frame nke ọ bụla na-agụnye igbe ebu na mkpịsị ala anọ na-echekwa akara n'ala n'elu ala dị nro. N'elu elu ndị siri ike, a na-atụ aro ka itinye mmiri ma ọ bụ akpa ájá (anaghị etinye ya) gafee eriri anya maka nchekwa.
Dị na nha 3, Obere (130 x 70cm), Ọkara (200 x 90 cm), na nnukwu (250 x 100cm). ọzọ size nwere ike ahaziri .
(1) Njikọ pụrụ iche nke WZRODS mere, iji mpịachi ọkọlọtọ dị mfe karịa ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya n'ahịa.
(2) Igwe mmiri na-adịgide adịgide na-eme ka ihe osise ahụ bụrụ ebe dị larịị.
(3) Enwere ike dochie ákwà e biri ebi ngwa ngwa.
(4) akpa akpa gụnyere, dị mfe ịchekwa na ibufe
(5) Mkpọ ígwè gụnyere iji chekwaa na ọnọdụ ikuku
(6) arọ agbakwunyere dị iche iche (akpa aja, akpa mmiri, wdg)
GW (naanị ngwa ngwa)
Nke gara aga: Ọkọlọtọ Lantern
Osote: Ọkọlọtọ gbapụta kwụ ọtọ
Ọkọlọtọ na ọkọlọtọ
Sistemụ ọkọlọtọ ọkọlọtọ
Ọkọlọtọ na ọkọlọtọ guzoro
ọkọlọtọ na-efe efe